Iyadoo Halista Xanuunka Corona Virus Socoto Ayaa Kooxda Liverpool War Ka Soo Saartay Kulankii Kooxda Atletico Madrid? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Liverpool ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xaalada kulanka Anfield ee Champions League ee ay la ciyaari doonto kooxda Atletico Madrid waxayna Reds qaaday talaabooyin lagu doonayo in halista cudurka Corona Virus looga taxadaro.
Liverpool ayaa shaacisay in ay darsayso isla markaana ay si dhaw ula socoto dhamaan fariimaha caafimaad ee ay ka heleen dawlada England iyo waliba waaxyaha caafimaadka ee halista ku xeeran kulanka Anfield ee Champions League.
Liverpool ayaa taageerayaasha kooxdeeda u soo bandhigtay waxa ay tahay in ay sameeyaan kulanka habeen danbe ee Champions league oo ay Anfield ku soo dhawayn doonaan kooxda Atletico Madrid.
Liverpool ayaa Anfield ku diyaarisay goobo ay taageerayaasha ka soo xaadiraya kulanka Atletico Madrid ay ku soo faraxalan karaan iyo waliba goobo caafimaad oo taageerayaasha ka caawin doono in ay iyaga oo nadaafad fiican leh garoonka soo gali doonaan.
Waxay Liverpool si rasmi ah u shaacisay in kulanka Anfield ay UEFA wali adeegsan karto carruurta marka garoonka la soo galayo ciyaartoyda u soo raacda balse waxaa laga mamnuucay in ciyaartoydu ay gacmaha soo qabsan doonaan carruurta soo raacda iyada oo qaab kale loo samayn doono.
Halkan hoose kaga bogo wax walba oo ay Liverpool kaga hadashay war saxaafadeedka ay ka soo saartay kulanka Anfield ee Atletico Madrid.
“Kooxda kubbada cagta Liverpool waxay sii wadaa in ay kormeerto isla markaana ay fuliso dhamaan talooyinka dawlada ee dilaaca Corona Virus ee ka hor kulanka arbacada Champions League ee Atletico Madrid, waxaanu qof kastaba oo ka soo qayb galaya ciyaarta xusuusinaynaa adeegsiga nadaafad fiican”.
“Waxaa jiri doona gacmo maydhayaal (cid dadka u faraxali doonta) ama waxyaabo ka hortagi kara bakteeriyada oo qolalka xamaamka Anfield ah, waxaa sidoo kale jiri doona boostaro ay saraakiisha caafimaadku ku xoojin doonaan talooyinka ee qof kastaaba in uu qaado masuuliyadiisa shaqsi oo ah nadaafad aad u fiican”.
“Waxaanu sidoo kale qaadaynaa talaabooyin taxadar ah oo maalinta kulanka ah iyo in ciyaartoydu ay ka dheeraan doonaan gacan qaadka ka hor bilawga ciyaarta. UEFA waxay wali sii wadi doontaa kulankan adeegsiga Mascots (carruurta ciyaartoyda garoonka la soo gasha) laakiin saf ayay gali doonaan si ay ciyaartoyda garoonka ugu soo dhaweeyaan waxayna ka dheeraan doonaan in jidh ahaan laysku taabto”.
“”Taageere kasta oo muujiya calaamadaha joogtada ah ee Corona virus waxaa waajib ku ah in uu naftiisa ka hubiyo madaxa saraakiisha caafimaadka iyo talada ah in naftiisa uu karantinimeeyo”.
“Waxaanu sii wadi doonaa in aanu qaadano talada ugu fiican ee maamulada ku haboon isla markaana waxaanu xog cusub siin doonaa taageerayaasha haddii horumar dheeraad ah la sameeyo” ayaa qoraalka Liverpool lagu soo gaba gabeeyay.
Kulamo badan oo UEFA Champions League iyo Europa League ah ayaa haddaba lagu dhawaaqay in garoomo madhan lagu ciyaari doono laakiin ilaa hadda kulamada UK ayaan wax halis ah la darsin iyada oo dhamaantood ay garoomadu furnaan doonaan.
Laakiin kulamada ay kooxaha Premier league ee Manchester United iyo Chelsea ku ciyaari doonaan Europa League iyo Champions League ayaa laga mamnuucay taageerayaal ka soo qayb gala.